Nhau - Nei kindergartens inosarudzawo matombo epurasitiki
Mumakore achangopfuura, kushandiswa kwematombo epurasitiki ematongerwo epasi mu kindergartens kwave kuwanda uye, uye mazhinji mamakiresheni anogona kazhinji kusarudza kumisikidza SPC pasi. Iyo yepasi imhando yerudzi kana ichagadzirwa neSPC Flooring Mukudhinda Line. Kubva pakuumbwa, inowanzo kuve yakakamurwa kuita homogeneous pepa pepa, multilayer composite sheet, uye semi-homogeneous core sheet; kubva chimiro, rakakamurwa kuita mativi zvinhu uye ubvise zvinhu. IyoSPC Flooring Kugadzira Machine yakave nesimba rakakura pahupenyu hwevanhu kubvira musi wawakazvarwa. Dombo repurasitiki rinoumbwa pasi rinodanwawo kunzi dombo repurasitiki pasi tile. Zita rakarongeka rinofanira kunge riri "PVC vinyl pasi". Iyo mhando nyowani yepasi yekushongedza zvinhu zvakagadzirwa nepamusoro-soro uye yepamusoro-tech tsvagiridzo nekusimudzira. Iyo inoshandisa chaiyo marble poda kugadzira yakakwira-density uye yakakwira-density pasi pasi. Iyo solid base rukoko rwefibre network dhizaini, iyo yepamusoro yakafukidzwa neiyo yepamusoro yekupfeka-inodzivirira polymer PVC yekupfeka-inodzivirira dura, iyo inogadziriswa kuburikidza nemazana enzira.
Kireshi cheKireshi SPC imhando yepasi pePSC, iyo yakagadzirirwa zvakananga kune kindergartens zvinoenderana nehunhu hwe kindergartens. Sezvo iyo kindergarten SPC pasi ine akateedzana ezvakanakira, yanga ichirumbidzwa nevanhu kubva pakuonekwa. Parizvino, mamaki mazhinji akaisa iyi mhando yepachikoro cheSPC pasi. Iyo chaiyo yekuongorora kwehunhu kunogona kuratidzwa mune zvinotevera zvirimo:
Kutanga, zvinobatsira kuve nechokwadi chekuchengetedza kwevana. Iyo SPC pasi ine hunhu hwekupfava uye kusimba, izvo zvinogona kudzikisira kukanganisa kwevana pavanodonha. Nekuti vana vanowanzo shanda, kushomeka kushoma kunodonha nekukuvadza, kwete chete kuvana, asiwo kune mukurumbira weiyo kindergarten. Kuonekwa kwedombo repurasitiki rinoumbwa pasi mumakireshi kunoderedza zvakanyanya kukuvara kunokonzerwa nerudzi urwu rwekukuvara, saka inogamuchirwa ne kindergartens.
Kechipiri, kuchenesa uye kugadzirisa kweiyo kindergarten's SPC pasi zviri nyore. Nekuti vana vanowanzoita tsvina pasi, kuchenesa pasi peiyo kindergarten rinogara riri basa rakaoma. SPC pasi inogona kushandiswa sechinhu chinenge chiri paving chinogona kuchicheneswa nemvura yekuyerera, uye chakaringana chiyero chekuchenesa mumiriri chinowedzerwa kumvura.
Yetatu, iyo kindergarten SPC pasi ine hunhu hwehupenyu hwakareba. Yakajairwa ivhu yakaoma, zviri nyore kukonzera zvakakomba kukuvara kwevana, uye haina kusimba kwazvo, uye zviri nyore kukonzera matambudziko senge kutsemuka. Mukupesana, iyo kindergarten ibwe repurasitiki repasi rinorebesa zvakanyanya hupenyu hwebasa renzvimbo yedu.
KEPT INDUSTRY inopa yakanakisa SPC Flooring Production Line, isu tiri nyanzvi ine ruzivo rwakanaka! Welcome to muvhunzo pamwe rokutengesa edu chikwata!
Post nguva: 2021-02-28